Indlu encinane eGalway Bay B&B Kinvara
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguGeraldine
IBreacan Cottage B&B yindlwana entle erustic enemibono yolwandle ejonge eGalway Bay kwiNtshona yeIreland. Simi ngaphandle nje kwelali entle yokuloba yaseKinvara, eCo Galway kwindlela yeWild Atlantic Way. Sisembindini weBurren, iAilwee Caves, Cliffs of Moher, Aran Islands, Galway City, kunye neConnemara.
Amagumbi ane-ensuite kwaye sineWifi yasimahla.
I-B&B yethu ibizwa ngokuba yiBreacan Cottage. Idilesi yethu yiParkmore, Doorus, Kinvara, Co Galway. H91 V2C3
Amagumbi ane-ensuite kwaye sinoFikelelo lwe-Intanethi olungenazingcingo lwasimahla.
Isidlo sakusasa esimnandi sase-Continental sibandakanyiwe kwaye sihanjiswa ntsasa nganye phakathi kwe-7.30 kunye ne-10 A.M.
Simalunga nemizuzu eli-10 yokuqhuba ukusuka kwilali yaseKinvara apho kukho iindawo zokutyela ezininzi ezintle kunye neendawo zokuzonwabisa ezinoMculo weSintu ophilayo. Sikwabonelela ngenkonzo yokuHlanjwa kwempahla ngomrhumo omncinci kwaye kukho indawo yokupaka yasimahla kwisiza. Sikwi peninsula ekude ke ngoko uya "KUDINGA IMOTO" ukuze ufike apha.
I-B&B yethu ibizwa ngokuba yiBreacan Cottage. Idilesi yethu yiParkmore, Doorus, Kinvara, Co Galway.
Uqhuba udlula elalini usiya ngaseBurren ku-N67 malunga neekhilomitha ezi-4 kwaye ujike ngasekunene kwindawo ebizwa ngokuba yi-Knockgearra. Uya kubona iimpawu zam zeB&B endleleni. Sikwindlela enye neHostel yoLutsha yaseDoorus. Qhuba nje uye ekupheleni kwaloo ndlela kwaye siyindlu yokugqibela ngasekhohlo ejongene nolwandle.
Sinendawo yokupaka ekhuselekileyo yasimahla. sikwanayo nenkampu enemibono yolwandle ukuba ungathanda ukuzisa intente kwaye ulale phantsi kweenkwenkwezi.
4.76 out of 5 stars from 255 reviews
4.76 · Izimvo eziyi-255
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi255
Ilali yaseKinvara yimizuzu eli-10 ukusuka kwindlu yethu kunye nesixeko sasegalway. isiqingatha seyure ngemoto.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 13:00 - 00:00